Dejinta Brave ee Android oo dib loo habeeyey oo leh qaab cusub iyo astaamo | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Brave Browser ee Android wuxuu dib u habayn ku sameeyay qaabayn cusub iyo astaamo
Brave Browser ee Android wuxuu dib u habayn ku sameeyay qaabayn cusub iyo astaamo
Brave browser for Android ayaa dhawaan soo bandhigay nooc cusub oo biraawsarkooda gaarka ah. Cusboonaysiintaan, waxaan ku helnay astaamo badan oo cusub. Mid ka mid ah sifooyinka aadka loo mahadiyay ayaa ahaa Liisaska heesaha geesiga ah. Waxa ay kuu ogolaanaysaa in aad kaydsato wax maqal iyo muuqaal ah oo saf ah oo aad u habayso sida aad jeceshahay. Brave Browser ee Android sidoo kale waxa uu dib u habayn ku sameeyay bogga dejinta isaga oo soo bandhigay qaabayn cusub iyo calaamado xulashooyinka Dejinta.
Cusbooneysiinta 1.26.43 ee ugu dambeysay, Brave waxay soo bandhigtay astaamo badan oo isticmaaleyaasheeda ah. Noocan cusub ee Brave waxa uu ku salaysan yahay Chromium 91.0.4472.77, kaas oo leh astaamo cusub oo Chrome ah, iyo Chromium oo ay ku jiraan kooxaha Tab.
Brave Browser ee Android wuxuu dib u habayn ku sameeyay habayn cusub iyo astaamo
Cusbooneysiinta 1.26.43 ee ugu dambeysay, Brave waxa ay dib u habayn ku samaysay muuqaalka goobaha browserka Brave. Hadda goobaha browser-yadu waxay u muuqdaan kuwo habaysan oo indhaha ka roon. Brave waxa uu u habeeyey fursadaha dejinta qaybo taas oo u fududaysay isticmaalayaasha in ay si degdeg ah u helaan Settings saxda ah.
Ikhtiyaaradan dejinta ayaa laga helayaa Brave Beta 1.26.43 waxaana loo diri doonaa siidaynta xasiloon goor dhow. Brave sidoo kale soo bandhigaya astaamo cusub oo ah ikhtiyaarka dejinta ee goobaha Brave browser. Astaamaha dejimaha cusub ee Brave browser waa kuwo qurux badan muuqaal ahaan iyo qaabayn ahaanba. Bal u fiirso calaamadahan cusub
Dejinta Qarsoonnimada waxaa loo beddelay gaashaanka geesiga ah & Qarsoonaanta
Nooca beta ee u dambeeyay ee biraawsarkaaga Brave waxa uu u beddelay Dejinta Qarsoodi oo loo beddelay “Gaashaasha geesinimada leh iyo ikhtiyaarrada gaarka ah”. Dejinta siraha geesinimada leh ee lagu daray ayaa hadda loo yaqaan "Gaashaannada geesinimada leh iyo ikhtiyaarrada gaarka ah". Waxay soo bandhigtay dhawr ikhtiyaar oo gaar ah oo cusub.
Dejinta AdBlocker hadda waxay leeyihiin saddex ikhtiyaar, xannibaad la'aan, Heerka, iyo Gardarrada. Waxa kale oo loo beddelay inay xannibaan Trackers & xayeysiisyada sanduuqa hubinta ee AdBlocker ee fudud.
Ka dib goobahan iyo isbeddellada kale ee naqshadeynta ayaa lagu dari doonaa sii-deynta xasilloon, khibradda isticmaaluhu waxay hubaal ahaan u fiicnaan doontaa. Si kastaba ha noqotee, Brave waxay umuuqataa inay diirada saarayso kor u qaadida mashruucooda BAT halkii ay hagaajin lahaayeen Browser laftiisa.
Haddii aad maqaalkan ka heshay mid xiiso leh, markaa fadlan ku wadaag warbaahinta bulshada oo ku dheji @droidmaze Twitter. Haddii aad hayso wax jawaab celin ah, ku dhaaf faallooyinka hoose. Sidoo kale, haddii aad tahay tipper, u dir tilmaantaada droidmazeteam@gmail.com ama care@qdient.com. Waad ku mahadsan tahay akhrinta maqaalka.
Isticmaalayaasha geesiyaasha ah waxay wajahayaan arrimo leh abaal-marinnada daawashada Xayeysiiska
Habeenkii waxay keentaa astaanta kaadhadhka amaahda ee Firefox
Ka takhalus kooxaha Tababbarka Chrome ee lagu qasbay Android
Bromite v90.0.4430.92 waa la sii daayay. Waa kuwan sifooyinka cusub
Samsung waxay siisaa 10,000 kuuboon qiimo dhimis ah oo ku saabsan dalacayaasha dhabta ah kuwa horay u dalbaday taxanaha S21
8 siyaabood oo lagu hagaajiyo khaladaadka ku xidhidhiyaha SSL ee daalacashada iyo daalacadaha kala duwan
Sidee buu Elementor u saameeyay WordPress 5 sano kadib?